शिक्षक सरुवामा कमिसनः माध्यमिकमा ५ र आधारभूतका लागि ३ लाख दिनुपर्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षक सरुवामा कमिसनः माध्यमिकमा ५ र आधारभूतका लागि ३ लाख दिनुपर्ने !
रुपन्देही, साउन २१ । केही महिनाअघि रुपन्देहीको तिलोत्ततमा ढिकुलीगढस्थित नमुना महिला आधारभूत विद्यालय प्रावि तहको एउटा दरबन्दी खाली भयो । शिक्षक दरबन्दी खाली भएपछि सरुवाका लागि केही शिक्षकले निवेदन दिए ।
निवेदनले मात्र काम गरेन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमशंकर भट्टराईले विद्यालयको खातामा दुई लाख रुपैयाँ राखिदिनेलाई मात्रै सरुवाको सहमति दिने प्रस्ताव राखे । अन्ततः दुई लाख बुझाउने सर्तमा स्याङ्जाबाट एक शिक्षक सरुवाका लागि प्रक्रियामा छन् । ‘विद्यालय कमजोर छ, केही सहयोग गरेर आउनुपर्छ भनेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ ।’
तिलोत्ततमा गत शैक्षिक सत्रमा खाली दरबन्दीको भागबन्डा गरिएको थियो । पार्टी निकट शिक्षक संगठनले दरबन्दी भागबण्डा गरेर शिक्षक सरुवा गरेका हुन् ।
एक शिक्षकका अनुसार सरुवामा कमिसनको दररेट निर्धारण गरिएको छ । माध्यमिक तहका लागि ५ लाख तोकिएको पनि कम्तीमा चार लाख बुझाउनै पर्छ । आधारभूत तहमा ३ लाख बुझाएर आउने धेरै छन् ।
‘पैसा नदिएसम्म विद्यालयको सहमतिसमेत पाइँदैन । सरुवा गराउने निकायमा बुझाउने कमिसन त अझै थप हुन्छ,’ ती शिक्षकले भने । यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: कमिसन, शिक्षक सरुवा